Maitiro ekuvandudza kuzvitonga kwakashata kweyako iPhone 6s | IPhone nhau
Isu tinoramba tichienderera nemabhingo nematambudziko anowanikwa nebhatiri ayo anodhonzwa neiyo iPhone 6s kubvira pakauya iyo iOS 10. Kunyangwe iyo kambani yeCupertino yakasimbisa kumwe kukanganisa kwefekitori mumhando dzekutenderera kwakatemwa, chokwadi ndechekuti ndiyo yakanyanya Mazhinji iPhone 6s zvishandiso vane dambudziko. Isu takakwanisa kuona kuti muzviitiko zvakawanda zviyero zvitanhatu zvine processor inogadzirwa neSamsung iri kuita matambudziko aya neIOS 6. Muchidimbu, Tiri kuzokupa mamwe matipi madiki ekuwedzera kuzvitonga kweiyo iPhone 6s.
Uye kunenge kusingatsungiririki bhatiri kunwiwa kuri kuitwa neiyo iPhone 6s kubvira pakauya iOS 10. Chokwadi ndechekuti parizvino iPhone Isu takaedza iOS 10.3 muchikamu chayo chekutanga chebeta kuitira kana zvikaunza isu kuvandudzika kwebhatiri sechinhu chitsva Pane ino kifaa, asi hapana chiri kumberi kubva pachokwadi, bhatiri haringogadziri neIOS 10.3 B1, asi rinotowedzera kana zvichibvira.
Saka, ngatiendei ikoko nemamwe matipi madiki ekuti yako iPhone 6s bhatiri igare kwenguva yakareba sezvinobvira, zvisinei, tinokuyambira kuti iwe ucharamba uine matambudziko akakomba uchisvika nekuzvitonga kwakakwana pakupera kwezuva kuti uve wakadzikama.
1 Kutarisisa kunyorera uye kuuraya kwavo kumashure
2 Iyo nzvimbo, inowanzo nzvimbo uye mamwe mabhatiri guzzlers
3 Kutarisisa kune kupenya kwechidzitiro, hazvidiwe kune zvakanyanya
Kutarisisa kunyorera uye kuuraya kwavo kumashure
Nehurombo, isu tese tinoshandisa WhatsApp seyedu huru yekutumira mameseji sevhisi, sezvo ichi chiri chimwe chekushandisa chinoshandisa bhatiri rakanyanya kumashure. WhatsApp Web uye anogara ari-paWhatsApp mapoka ane mhosva zvakanyanya. Naizvozvo, tinokurudzira kuti uende kuchikamu Zvirongwa> Zvakajairika> Kumashure kugadzirisa uye kudzima kutonga kweWhatsApp. Nenzira iyi, iwe unozoona kuwedzera kudiki mukuzvitonga, kunyangwe kana usina mapoka anoshingairira, mutsauko hauzove mukuru kana. Ini ndinodzokorora, ndiwo ese-ese-anoshanda-mapoka mapoka anoita mhirizhonga nemadhiramu.
Iyi michina inogona kuendeswa kune mamwe maapplication ayo zvakare anoshandisa akawandisa bhatiri kumashure, zvinoshamisa kuti zvese zviri zveFacebook, isu tiri kunyatso kutaura nezve Messenger, Instagram uye yechizvarwa Facebook application.
Iyo nzvimbo, inowanzo nzvimbo uye mamwe mabhatiri guzzlers
Tichatanga kuenda Zvirongwa> Kuvanzika> NzvimboNgatitorei nekukurumidza kuti titarisise ese maapplication ane "Nguva dzose" kupinda kune chishandiso, kumwe kunokosha bhatiri kunwa, isu tichaisiya ichishandisirwa chete "Kana ichishandiswa", nekudaro isu tichachengetedza zvisina kufanira kushandiswa.
Asi kiyi haisi pano, kiyi iri mune mamwe masevhisi masevhisi, ayo nokutendeseka vazhinji vedu taisazoshandisa, asi zvakanaka vanodya bhatiri. Saka ngatiendei ku «System masevhisi»Uye isu tichaona iyo runyorwa rwekugadziriswa, yekutanga kumisa ichave«Kazhinji nzvimbo»Uye zvese izvo zve«Kurudziro nenzvimbo»Kana maAds, hazvidi kuti ivo vatonge nzvimbo yedu kutishambadza ...
Kutarisisa kune kupenya kwechidzitiro, hazvidiwe kune zvakanyanya
Kupenya kweiyo skrini ndeimwe yeakakura mabhatiri vatengi echishandiso. Nehurombo, iPhones haina AMOLED tekinoroji, zvinoreva kuti kuvhenekerwa kwechidzitiro kuri kuburikidza nemaLED kumashure kwayo, nekudaro, mapikiseli chete atinoda haakwanise kuvhurwa, chinhu chinoponesa huwandu hwakawanda hwebhatiri. Naizvozvo, zvakakosha kuti isu tishande kupenya kwechidzitiro zvakanaka.
Kutanga tichaenda ku Zvirongwa> Ratidza uye kupenya Kugonesa kupenya otomatiki, izvi zvinonakidza kwazvo, nekuti kana isu tiine iyo yekupenya sensor yakanyatsogadziriswa, tichava nekukwana kwakaringana kune yega yega mamiriro acho. Saka isu tichaenda kunochengetedza bhatiri, uye zvinonakidza kwazvo.
Kana isu tichiona kuti hazvina kunaka akaenzana hunyengeri huri mukutarisa chikamu ichocho, kudzikisa kupenya kusvika padiki, kudzima kupenya kwe otomatiki uye kupinda mukamuri rakasviba zvachose. Ipapo, isu tichagadzira iyo otomatiki kupenya zvakare uye ichave yakaverengerwa kune iyo nyowani mwenje mamiriro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvandudza kuzvitonga kwakashata kweyako iPhone 6s
Uye iyo iPhone 6, kwete iyo chete 6S
Aaron Ontiveros akadaro
Ini ndakataura nezvazvo mune yapfuura posvo, heino dambudziko mumaonero angu ndeye Samsung chip, ine iyo TSMC chip zvinhu zvinofamba zvirinani.
Pindura kuna Aarón Ontiveros
Kana ukadzima nharembozha, bhatiri rinotora vhiki …… .. zvinosuwisa sei kuti vanotengesa iwe kwete Apple kana asiri iwo mabrandi mazhinji, iyi nharembozha Super chachi lollipop ine 3 g 4g yekubatanidza kuburikidza neststellar satellite satellite hahahaha handei kubatana uye zvobva zvabuda kuti havakwanise kana kupedza maawa masere ehupenyu hwebhatiri. Ichokwadi chinosarudza nhare mbozha asi nebhatiri rakawanda
«Pauperrima» Flipo nemusoro wenyaya. Uye iyi webhusaiti yakatsaurirwa kuna Apple? Izvo zvichave sei zvisingaite?
Dambudziko rebhatiri imhosva yekuvandudza kune ios 10 yakapusa. Ios yaakaunza seyakajairwa kuma6s angu, bhatiri rinogara mazuva maviri pasina matambudziko.
Ramba uchigadzirisa kuti yega yega ios inouya nechishamiso!
Iwe unorema zvishoma nebhatiri reYAKO iPhone 6S. Ndakaitenga muzhizha uye bhatiri rinoshanda zvakakwana, sezuva rekutanga. Kana uine matambudziko ebhatiri, enda kuApple Chitoro uye wozvitarisa kwauri. Zvichida ndezvekuti iwe wakasununguka kuti unyungudise bhatiri neiyo Pokemon uye ikozvino hauna "uine" mabhatiri ehupenyu hwehupenyu.
Miguel, unogona kundiudza kuti ndeapi masisitimu esarudzo andinofanira kudzima? mazhinji anobuda uye ini handizive chokwadi icho chimwe nechimwe chakaitirwa. Ndatenda!!!
Miguel, unogona kundiudza kuti ndeapi masisitimu esarudzo andinogona kumisikidza? ndeyekuti kune akawanda uye ini handizive kuti yega yega ndeyei. Ndatenda!
Nei zviri kuti vashandisi ve iPhone vanosimbirira pakudzivirira bhatiri remidziyo yedu isu tichiziva kuti havana kuita kwakanaka?
Ndanga ndichishandisa maPhones akasiyana kweanenge makore manomwe uye ivo vanogara vachitambura neizvi, ini handinzwisise kuti sei vamwe vachiti zvinopesana kana zviri pachena kune wese munhu.
Exif Viewer, yemahara kwenguva shoma